Khaalid Caskar | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
About the Author Khaalid Caskar
Waa qoraa ka tirsan Afrikaan. Wuxuu wax ka qoraa arrimaha bulshada, caafimaadka, waxbarashada, jaceylka, dhaqamada, siyaasadda iyo dhaqaalaha. Qoraagga wuxuu cilmi gaar ah u leeyahay dhaqaalaha iyo siyaasadda. Siddoo kale qoraagan ayaa ah qoraa hodan ku ah qorista afka Soomaaliga.
Xanjada iyo Waddanka Singabuur!
Khaalid Caskar, February 23, 2020
Buufinta iyo isticmaalka xanjadu waa wax iska caadi ah dunida, laakiin waddanka Singabuur waa danbi ciqaab lagu mutaysanayo! Lama soo dejin karo, laguma dhex iibin karo, laguma dhex isticmaali karo, xataa inta lagu dhex sameeyana lagama dhoofin karo! Qofka isaga oo soo dejinaya, ama waddanka ku dhex iibinaya lagu qabto, waxa lagu ciqaabayaa sannad xadhig ah, iyo 5,500 oo dollar, xeer ayaana sheegaya ciqaabtan. Dhiniciisa, qofka lagu qabto isaga oo ku calaashanaya, oo ku dhex isticmaalaya suuqa, waxa lagu ganaaxayaa 500 ilaa 1,000 oo dollar. Maxaa Loo Mamnuucay 1983 dii, ayaa wasiirkii horumarinta arrimaha bulshada ee waddankani ka codsaday ra’iisal …
Sida Ilaahay, Mise Sida Dadka!
Khaalid Caskar, January 20, 2020
Sida Ilaahay, Mise Sida Dadka?! Nin waalan ayaa soo galay fadhi uu oday suldaan ahi marti-soor ku sameynayey. Suldaankii waxa loo keenay timir. Ninkii waallaa ayuu ka codsaday suldaankii qabiilku in uu timirta u qaybiyo martida. Ninkii waalla: Ma sida dadka ayaan u qaybiyaa, mise sida ilaahay? Suldaankii: sida dadka u qaybi! Ninkii waxa uu qof walba siiyay saddex xabbo oo timir ah, intii soo hadhayna waxa uu hor dhigay Suldaankii. Suldaankii: Hagaag! Haddana bal sida ilaahay u qaybi! Timirtii ayuu soo uruuriyay ninkii waallaa, kaddibna waxa uu u qaybiyay sidan: Ninkii ugu horreeyay waxa uu siiyay hal xabbo oo …
12 Xeer Oo Cilmiga Nafta Ah
Khaalid Caskar, January 16, 2020
12 XEER OO CILMIGA NAFTA AH – AKHRI! 1. Xeerka Raaxada Nafta – In aad meelaha fawdada ah iskaga cararto, qiimaheedu aad buu u sarreeyaa! Naftaada haku cabudhin meel fawdo ah, oo aanay doonayn. 2. Xeerka Maskax-badnaanta – Iska-dhaga marka dadka qaar, iyo in aanad qofna ka waynaysiinin muggiisu, qof kasta waxa uu kuu muujinayaa waxa uu yahay. Marmarka qaar is-dhaga mar! 3. Xeerka Kaaftoonka – Wax kasta oo aad ka kaaftoonto maad khasaarin, waxyaabaha qaar in aad faraha ka qaaddaa waa BILOW WANAAGSAN! 4. Xeerka Horumarinta Nafta – Naftaada xagga sare, iyo martabad fiican u baadh-baadh. Dabaqadda hoose ee …
Caruurtii Rasuulka SCW
Khaalid Caskar, August 31, 2018
Nebiga caruurtiisu waxa la isku waafaqsanyahay inay ahaayeen 7 caruur ah, 4 hablood iyo 3 wiil. 1- Qaasim: Qaasim waxa uu ahaa kii ugu waynaa caruurta rasuulka N.N.K.H, waxana Qaasim uu ahaa inankii looga kunyo-yeelay rasuulka oo watii la odhan jiray Abal-Qaasim. Qaasim waxa uu noolaa ilaa uu gaadhay 2 sano, culimada siirada qaarkoodna waxa ay sheegaan inuu noolaa ilaa uu awood u yeeshay inuu faradaha iyo rakkuubka fuuli karo. 2- Zaynab: Zaynab waxa ay ahayd marka xagga hablaha la eego tan ugu wayn hablaha rasuulka scw. Saynab mar uu nebigu ka hadlay fadligeeda ayaa waxa uu yidhi: “Tan waa …
Waxyaabaha Bur-buriya Hal-abuurnimada Caruurta
Khaalid Caskar, August 26, 2018
Waxan aaminsanahay sida uu qof waliba u dhasho isaga oo Muslim ah, in sidoo kale uu ilma kastaaba dhasho isaga oo caaqil ah, maskaxbadan oo hibooyin iyo hal-abuurnimooyin leh, balse ay dadka iyo bulshada uu kusoo dhex koro ama deegaanka uu kusoo bar-baaraa ka dhigo: halayay ama hudeec, aftahan ama agnaan, nacas ama fariid. Sida ay u jiraan waxyaabo badan oo koriya maskaxda caruurta iyo hal-abuurnimadooda, waxa jira falal iyo hadallo bur-buriya ama dhaawaca hal-abuurnimada caruurta. Waxaynu halkan ku eegi donna dhawr qodob oo kamid ah. Dhirbaaxada ilmaha yar lagu dhuftaa waxay keentaa inay dhintaan 400-300 unug neerfeed …
Xuquuqda Qoraalada Iyo Qaabka Saxda Ah Ee Loo Xigto
Khaalid Caskar, July 29, 2018
Aadanuhu waxa uu isku raacsanyahay in wax walba lahaanshahooda iyo xuquuqdiisu ay u ilaashantahay ciddii alliftay, samaysay ama qortay. Waxyaabaha xuquuqda xatooyaysiga u bandhigan leh waxa kamid ah qoraalada. Innaguna (Soomalida) maaddaama oo aynaan ahayn ummad si wayn wax u akhrida una qorta, wax wayn uma aragno, wax badanna waa laga yaabaa in aynaan ka ogayn xuquuqda gaar ka ah ee ay leeyihiin qoraalada uu qof innaga mid ahi maskax, qalin iyo waqtiba u huray. Haddaba akhristayaal, maqaalkan waxan aan ku eegi doonnaa jawaabaha waydiimahan: Maxay qoraaladu xuquuq u yeesheen? Sidee ugu habboon ee aad qoraal u soo xigan kartaa? …
Xaasaskii Rasuulka scw iyo Hooyooyinkii Mu’miniinta
Khaalid Caskar, July 15, 2018
Waa dad ay tahay inaynu baranno oo wax ka ogaanno nolohoodii. Akhriste; haddii aanad hore si fiican ugu wada aqoon xaasaskii rasuulka, nasiib ayaad leedahay saacaddan, akhri oo baro. Waxa uu rassuulku guursaday intii uu noolaa kow iyo toban ilaa laba iyo toban dumar ah. Noloshiisa intii u danbaysay waxa isku soo gaadhay sagaal xaas. Saddex ama laba kamid ah waxay ay dhinteen isaga oo nool. Xaasaska nebigu waa hooyoonkii mu’miniinta sida ilaahay uu ku sheegay aayadda 6 aad ee kamid ah suuradda Al-axzaab. Xaasaskii nebigu innaga oo si kooban uga hadli doonna waa kuwan: Khadiija Bintu Khuwaylad RC …
Hal sano kahor subax Jimce ah, ayay ahayd markii Cabdiraxmaan oo aannu saxiib hore ahayn, jid iyo jidiinba aan soo wadaagnay, in muddo ahna aan shaah iyo sheeko toonna na dhex marin ilaahay nagu kulansiiyay goob laga qaxweeyo. Bariido aanan hilmaami doonin iyo is habsiin diirran kadib waxa uu soo fadhiistay dhinacayga midig, isaga oo dhoolla caddaynaya, inyar kaddibna waxa uu ii bilaabay qiso riyo ahaan ugu dhacday raad iyo saamayn waynna ku reebtay noloshiisa. Waxana uu ku bilaabay Habeen habenad kamid ah, ayaa waxa aan lasoo caweeyay asxaabtayda, oo aan kaftan iyo sheeko waqti badan ku idlaynay. Waxa …
Kulliyadda dhaqaaluhu waa mid kamid ah kulliyadaha aas-aasiga ah, ee badiba jaamacadaha dunida. Waa kulliyad ama qayb muhiim u ah dhismaha iyo horumarka dawladeed, dhaqaaleed, bulsheed iyo siyaasadeedba. Markaynu leenahay kulliyadda dhaqaalaha, maaha inaynu ku koobnaan doonno warc-celinta iyo jawaabta su’aasha kor ku xusan ee ah: “Waa Maxay Kulliyadda Dhaqaaluhu?”, balse waxa lagama maarmaan iyo muhiimba ah inaynu wax isaga sheegno xog kooban oo ku saabsan Cilmiga dhaqaalaha ee lagu barto kulliyaddan. Qaybtan ama kulliyaddan sida mageceeda kamuuqata waxa lagu bartaa Cilmiga Dhaqaalaha, haddaba; Waa maxay Cilmiga Dhaqaaluhu? Qeexitaanadii ugu horreeyay ee cilmiga dhaqaalaha waxa kamid ah qeexitaanka oo …
Dad badani waxay kacabanayaan dakhli yaraan ama la’aan, sababo badan oo ay ugu waynyihiin xirfad la’aan, aqoon la’aan iyo kaabayaasha iyo ilaha dhaqaalae ee deegaanka ama waddanka ay joogaan oo aan si fiican looga faa’idaysan. Dadka aan shaqayn marka laga yimaaddo, xattaa dadka dawladda, shirkadaha ama hay’adaha u shaqeeya laftooda ayaan mushaharka lasiiyaa ku fillayn, sidaa awgeed ayay dadbadani u jeclaystaan inay sameeyaan ilo dhaqaale oo ay kahelikaraan dakhli ay gaar u leeyihiin. Haddaba; kahor inta aynaan ku daadegin nuxurka mawduuca, waxan eegi doonaa faa’idooyinka iyo faa’ido darrada uu leeyahay inaad samayso ganaci aad gaar u leedahay. Faa’idooyinka: …